“laba gaadhi ayaa soo weeraray barqadii ciidanka Gambadha, haseyeeshee labadii baabuur mid baanu ka qabsanay” Afhayenka Milateriga Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA “laba gaadhi ayaa soo weeraray barqadii ciidanka Gambadha, haseyeeshee labadii baabuur mid...
“laba gaadhi ayaa soo weeraray barqadii ciidanka Gambadha, haseyeeshee labadii baabuur mid baanu ka qabsanay” Afhayenka Milateriga Somaliland
Hargeysa-(Berberanews)-Afhayeen u hadlay Ciidanka Militeriga Somaliland ayaa faah faahin ka bixiyay dagaal kooban oo maalintii shalay ka dhacay Sool iyo bariga gobolka Sanaag.
Afhayeenka Ciidanka Militariga Somaliland Gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan (Cabdi Dheere), ayaa ka warbixiyey dagaalo goos goos ah oo ka kala dhacay Sool iyo Sanaag, waxaanu sheegay in shalay ciidamo Puntland soo galeen gobolka Sanaag oo dagaal ku dhexmaray gobolkaasi, halka maanta deegaanka Gambadha ciidanka jooga ay soo weerareen Puntland.
“Shalay iyo maanta waxa dhacay dagaal gaadmo ah oo ay ka sameeyeen gobolka Sanaag bari iyo Sool, waxay shalay ciidanka Militerigu ka war helay ciidan Puntland oo soo galay Sanaag, ka dibna waanu eryanay oo baacsanay ilaa aanu gaadhsiinay xuduudda”ayuu yidhi afhayeenka Taliyaha oo ka hadlayey dagaalkii shalay ka dhacay Sanaag.
Mar kale waxa uu sheegay in dagaal kale ka dhacay deegaanka Gambadhha ee gobolka Sool, waxaanu yidhi “laba gaadhi ayaa soo weeraray barqadii ciidanka Gambadha, haseyeeshee labadii baabuur mid baanu ka qabsanay oo hadda gacanta ayaanu ku haynaa, haseyeeshee waxa wararka xagooga naga soo gaadhayaa sheegayaan in afar askari oo uu ku jiray taliyihii watay uu ku dhaawacmay oo ay u baxsadeen dhinaca xadka”.
Previous articleDawladda Somalia oo sheegtay inay gorgortan ka gelayn Badda
Next articleXisbiga KULMIYE oo kulan la Qaatay Wefti Ka Socda Midowga Yurub